डिसेम्बरमा रणवीर–दीपिका विवाह ? | Nagarik News - Nepal Republic Media
डिसेम्बरमा रणवीर–दीपिका विवाह ?
मुम्बई – ५ वर्षदेखि मिडियासँग लुकी छिपी प्रेम गर्दै आएका रनवीर सिंह र दीपिका पादुकोन अन्ततः विवाह बन्धनमा बाँधिने भएका छन् । दुवैले यही वर्षमा विवाह गर्ने खबर पहिलेदेखि चल्दै आएको भए पनि दुवैले यस विषयमा मौनता साँध्दै आएका थिए ।
मुम्बई मिररलाई उद्धृत गर्दै अन्य भारतीय समाचार माध्यमले रणवीर र दीपिकाका बाबु आमाले सेप्टेम्बर र डिसेम्बरको बीचमा विवाह मिति निकाल्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । यसमा लागि उनीहरूले यो दुई महिनाबीचका चार दिन छानेको पनि समाचारमा दाबी गरिएको छ ।
दीपिकाले विवाहका लागि किनमेल थालेको पनि ती समाचारले दाबी गरेका छन्। मिररले लेखेको छ, ‘हिन्दू विवाह विधि अनुसार एकदमै गोप्य रुपमा विवाह हुनेछ । विवाहमा दुवैतर्फका एकदमै नजिकका आफन्त र साथी मात्र सहभागी हुनेछन्। विवाहपछिको रिसेप्सन पार्टीका बारेमा भने दुवैले अहिलेसम्म छलफल टुंग्याइसकेका छैनन्।’
बलिउड कलाकारको विवाहको लुगा कसले डिजाइन गर्ने भन्ने कुरामा पनि धेरैको चासो रहन्छ । स्रोतका अनुसार विवाहको मितिसँगै डिजाइनर पनि को राख्ने भन्ने दुवैले निर्णय लिइसकेका छैनन्।
इन्डिया टुडेसँगको कुराकानीमा विवाह रणवीरले विवाह आफ्नो रुचिमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । रणवीर र दीपिकाको अफेयर ‘राम लिला’बाट ५ वर्षअघि सुरु भएको थियो । बीचमा ब्रेकअपको खबर आए पनि केही समयपछि दुवैलाई सँगै अँगालोमा जिस्किँदै गरेको देखिएको थियो।
रणवी र दीपिकाले सँगै ‘बाजीराव मस्तानी’ र ‘पद्यावत’मा काम गरेका थिए । दीपिका कपुर रणवीरसँगको ब्रेकअपपछि सिंहसँग ठोक्किएकी थिइन् भने सिंहले अनुष्का शर्मालाई छाडेर दीपिकालाई अँगालेका थिए।
प्रकाशित: १८ चैत्र २०७४ १०:३५ आइतबार
डिसेम्बरमा रणवीर–दीपिका विवाह